चैत्र २४, २०७७ ०७:४४ मा प्रकाशित
वास्तवमा यथार्थता अलि जटिल छ । त्यसो भए खोप लगाएका व्यक्तिले के गर्न हुन्छ अनि के गर्न हुँदैन त ?
धेरै मानिस कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने बित्तिकै यसले काम गर्न थाल्ने भन्ठान्छन् । उनीहरू पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्किने सोँच्छन् । खासमा उनीहरू मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भोज तथा पार्टीहरूमा निर्बाध सहभागी हुन नपाउने तथा साथीभाइहरूसँग अँकमाल गर्न नपाउने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डबाट छुटकारी पाउने सोँच्छन् ।
वास्तवमा यथार्थता अलि जटिल छ । त्यसो भए खोप लगाएका व्यक्तिले के गर्न हुन्छ अनि के गर्न हुँदैन त ? अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले हालसालै एक निर्देशिका जारी गर्दै यसबारे बताएको छ । सीडीसीका अनुसार खोप लगाएका व्यक्तिहरू एकै स्थानमा भित्र कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरीकनै रहन सक्नेछन् ।
यस्तै संक्रमणको जोखिममा नरहेका तथा खोप नलगाएका आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग खोप लगाएका व्यक्तिहरू कुनै मापदण्डबिना नै सँगै रहन सक्नेछन् । तर खोप लगाएका व्यक्तिहरूले बाहिर सार्वजनिक स्थल वा भीडभाडतिर निस्कदा भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरू घरभित्र घरकै सदस्यहरूसँग पुरानै तरिकाले रहन सक्नेछन्’, सीडीसीका निर्देशक रोचेली वालेन्स्कीले भन्नुभयो, ‘बाहिर सार्वजनिक स्थलतिर जाँदा चाहिँ खोप लगाएकाहरूले समेत स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनैपर्छ ।’सीडीसी र अधिकांश विज्ञहरूले प्राकृतिक रूपमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास नभएसम्म वा अधिकांशलाई खोप नदिएसम्म मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी प्राकृतिक रूपमै भाइरस सजिलैसँग फैलिन नसक्ने अवस्था नपुगेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइरहनुपर्ने हुनसक्ने विज्ञहरूको मत रहेको छ । सीडीसीको निर्देशिकाले खोप लगाएका व्यक्तिबाट कोरोना सर्ने सम्भावना कम देखिएको संकेत गर्छ । तैपनि खोपको प्रभावकारीता अवधि, भाइरसको नयाँ प्रकार लगायतले अर्को अनुत्तरित प्रश्न खडा गरिदिएको छ । पछिल्लो समय बेलायत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखा परेको छ । जुन भाइरस पहिलेको भन्दा तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने बताइएको छ ।
खोप लगाएका व्यक्तिले अर्को खोप लगाएको व्यक्तिलाई भेट्न मिल्छ ?
विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले अर्को पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको व्यक्तिलाई कुनै स्वास्थ्य मापदण्डबिना नै भेट्न सक्नेछन् । सीडीसीको निर्देशिका तथा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार फाइजर वा मोडर्नाको दुबै मात्रा लिएको र जोन्स एन्ड जोन्सनको एक मात्रा लिएको दुई सातापछि पुरानै तवरले एकअर्कासँग रहन बस्न सकिनेछ ।
बोस्टोनस्थित बर्मिङ्घम तथा महिला अस्पतालका निर्देशक डा. पउल इ. स्याक्सका अनुसार खोप लिइसकेको अर्को व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नु ‘वैज्ञानिक रूपमा निकै सुरक्षित’ हुन्छ । कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत नहुने भन्दै उहाँले खोप लगाएकाहरूसँगको भेटघाट अलि सुरक्षित चाहिँ पक्कै हुने बताउनुभयो ।
ठुलालाई खोप लगाएर बालबालिकालाई लगाएको छैन भने के हुन्छ ?
अहिलेसम्म १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि खास खोप विकास भइसकेको छैन । सीडीसीको निर्देशिकाले मानसिक रूपमा सहज भने बनाएको छ । निर्देशिका अनुसार परिवारमा पुरै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले जोखिम कम भएका तथा खोप नलगाएका सदस्यसँग स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिकन नै रहन सक्नेछन् । बालबालिकालाई कोरोनाको जोखिम कम भएको समूहमा राखिएको छ ।
के खोप लगाएका मानिसले भाइरस फैलाउन सक्छन् ?
बालबालिकामा पनि साना र किशोर उमेर समूहमा भाइरस संक्रमण हुने र फैलिने सम्भावना फरक हुने डा. स्याक्सले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार साना बालबालिकामा भन्दा किशोर उमेर समूहकाले बयस्क मानिसले झैँ संक्रमण फैलाउने र संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ ।
डा. वेनले परिवारको ठुला व्यक्तिले खोप लगाए पनि बालबालिकाले नलगाएको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय, खेल्ने स्थान तथा छिमेकीसँगको भेटघाटले पनि कोरोना फैलिन सक्ने हुनाले सकेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
पछिल्लो अध्ययनले खोपबाट ८० प्रतिशत भन्दा बढी संक्रमण फैलिने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ । डा. गान्धीका अनुसार खोपले संक्रमण फैलिन सम्भावनालाई कम गराउँछ । तर अन्य विज्ञहरूले भने अहिलेको अध्ययन नतिजा प्राथमिक चरणमै रहेकाले यसै भन्न नसकिने बताउनुहुन्छ । यसका साथै अहिले देखा परेका नयाँ किसिमका कोरोना भाइरस पनि चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
खोप लगाएपछि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
चिकित्सासँग सम्बिन्धित तालिका निर्मार्ण गर्ने सल्ला डा. वेन दिनुहुन्छ । दाँत सफा गर्नुपर्ने, कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने लगायतका तालिकालाई पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ । डा. वेनका अनुसार सुरक्षित हुने भएकाले जुनसुकै कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।
घुम्न निस्कदा के हुन्छ ?
सीडीसीले यसबारे केही बताएको छैन । डा. वेनका अनुसार खोप लगाउनाले जोखिम कम गर्ने भएकाले होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका स्थानमा जान सकिन्छ । तर त्यस्ता स्थानमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने खोपले शतप्रतिशत चाहिँ सुरक्षा दिदैन । त्यस्तै जान लागेको स्थानको अवस्थाअनुसार घुम्न जान सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
पाका आमाबुवाका लागि भ्रमण गर्नु सुरक्षित छ ?
संक्रमणबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै पूर्ण मात्रा खोप लगाएका पाका आमाबुवासहित सबै जना भ्रमणमा निस्कनु राम्रो हुने डा. वेन बताउनुहुन्छ । ‘घुमफिर गर्नु आफैँमा कम जोखिमपूर्ण हुन्छ’, डा. वेन भन्नुहुन्छ, ‘यदि उहाँहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै घुमफिरमा निस्कनुहुन्छ भने संक्रमण जोखिम अत्यन्तै कम हुन्छ अनि फाइदा उस्तै धेरै हुन्छ ।’
घरभित्र जस्तै; होटेल वा रेस्टुरेन्टमा खाना खाने स्थान, जिमखाना, प्रार्थना गर्ने स्थान वा मानिसहरू बोलिरहेका स्थानमा बढी जोखिम हुन्छ ।
खोप लगाएपछि पनि कुनकुन क्रियाकलाप कम अनि बढी जोखिमपूर्ण छन् ?
खोप लगाएका व्यक्तिहरू भित्री स्थानमा काम गर्न अलि सहज हुने ठान्छन् । त्यस्तो स्थान (जस्तै; संग्राहलय) मा काम गर्दा वा रहँदा मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाइरहनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बाहिरी क्रियाकलापहरू अझ सुरक्षित हुने डा. स्याक्स बताउनुहुन्छ ।घरभित्र जस्तै; होटेल वा रेस्टुरेन्टमा खाना खाने स्थान, जिमखाना, प्रार्थना गर्ने स्थान वा मानिसहरू बोलिरहेका स्थानमा बढी जोखिम हुन्छ ।
कोरोना जोखिममुक्त हुन्छ